အိန္ဒြာ: တကယ်တော့ အဲဒီ့ပြကွက်ဟာ အတု
တကယ်တော့ အဲဒီ့ပြကွက်ဟာ အတု
ညထဲမှာ နောက်ည တစ်ခုက ထပ်ပြီး မှောင်မိုက်လို့
ဆက်တင်မှာ အခိုးအငွေ့တစ်ချို့ အူနေတယ်..။
မသိရင် သွေးတွေ ဆမ်းချလိုက်သလိုမျိုး အနီရောင်
ဟိုဟိုဒီဒီလင်းနို့တွေ တဖျတ်ဖျတ်ပျံသလို အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့
ကလေးတွေ အမေ့ရင်ခွင်ထဲ အတင်းကွယ်လျိုး
ချစ်သူတွေ ပုခုံးချင်းကျစ်ကျစ်ပါအောင် ပိုက်ထွေးဖေးမကြ
ဘာ တွေ လုပ် ပြ ဦး မှာ လဲ....
ဒိတ် ဒိတ် ဒိတ်ဒိတ် ရင်တုန်မောဟိုက်တယ်..။
ဘယ်အချိန်သုတ်သုတ်ရနိုင်တဲ့ အသားတစ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သလို...
အထက်စီးကနေ...အူ မ ချေး ခါး ကြည့်လိုက်ပြီ..။
ငွေပြာရောင်လေးကို လက်ရ ဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်တယ်.။
ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လဲလျောင်း ပိတ်လှောင်စေခဲ့ပြီ..
သွေးဆာနေတဲ့ မိစ္ဆာ တစ်ကောင်
ချောက်ကပ်နေတဲ့ လည်ချောင်းမှာ...အသံတွေ အတုန်းအရုန်းသေဆုံးကုန်ကြတယ်..
၀ူး ၀ူး ၀ုန်း ၀ုန်း......
သွေးစေးတွေ အထွေးလိုက်ကပ်နေတဲ့ တစ်ဝက်ပြတ်ခေါင်းတလားထဲမှာ
ဆက်တင်က ကြယ်ကြွေတွေကို ဆလိုက်ထိုးပြီးပြနေတယ်..
အဲသလို ရုံသွင်းအပြခံနေရတဲ့ အတုအယောင်တွေကြားထဲမှာ..
အဲသလို စိတ်တွေကို အထပ်လိုက်မီးတင်နေတဲ့ပြကွက်မှာ
စိတ်တွေ ကိုယ်တွေ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြပြီ...
ငွေပြာရောင်လေးကို သူတို့ မင်းသမီးလေးကို...
ကျွန်တော်တို့ ဆေးရောင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်....
အမရေ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူး... ကျနော်တကယ်သဘောကျတယ် ဒီကဗျာကို... ငွေပြာရောင် မင်းသမီးလေး တကယ်ပဲ... ပြန်ထနိုင်ပါအုန်းမလား... ကျနော်တို့တွေ ပွဲမပီးခင်ပြန်ရမဲ့သူတွေ ဖြစ်နေရင်ရော... အတုလို့ ထင်ထားတာ မှာ တကယ်လို့ အမှားအယွင်းတစုံတရာ ရှိခဲ့ရင်ရော... ပြကွက်များအတွက် ဓါးစက်မှာ ကားခနဲ့သွားမဲ့...
ဘာရယ်သေချာမသိပေမဲ့ ထင်တာလေးတွေ တွေးမိပါရဲ့...
ပဉ္စလက် တစ်ရပ်ရဲ့ အသက်ဟာ
ပြသသူနဲ့ ကြည့်ရှုသူ စပ်ကြားက
ငယ် ဘဝ မှာကျန်ခဲ့ပြီ အစ်မရေ ...
အခုတော့ ပျော်ဝင်နစ်မြုပ်လို့ ...
အားအင်တွေ ကုန်လို့ ......။။
လောကထဲက ပြကွက်အမျိုးမျိုး ဆက်တင်အမျိုးမျိုးမှာ မှော်ဆရာတွေအများကြီး မင်းသမီးလေးတွေအများကြီး..
မောကြီး ပန်းကြီး စလိုက် ဆုံးလိုက် မှောင်မဲမဲ ဇာတ်ရုံကြီးထဲက ပြန်မထွက်နိုင်သရွေ့ပေါ့..။
မရေ..ကဗျာလေးက ရင်ထဲစွဲသွားပြီး မယ့်စိတ်ထဲတော့ အဲဒီပြကွက်က အစစ် ။ အဲဒီပြကွက်က အစစ်လို့ အော်နေမိတယ်။
ငိုချင်တယ် =( .
အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ဝေဒနာပေါင်းများစွာကို ခံစားလိုက်ရသလိုပါပဲ...ပြကွက်ကတကယ်အတုပဲလား
သေချာတာက သံသရာက အတုမဟုတ်ဘူး
ကောင်းလိုက်တဲ့..ကဗျာ.. ၀တ္တုတို တပုဒ်လို ဖတ်သွားတယ်။
ကဗျာထဲက..လောဂျစ်အရတော့.. တခါ ဆရာဦးဝင်းဖေ ပြောဖူးတဲ့..စကားထဲမှာ..တခါတလေ..လူတွေက.. ဆိုးချင် ၇မ်းချင်စိတ်.. သတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်.. ကြေက်ချင် ရွံ့ချင်..အော့နှလုံးပျက် စိတ် တွေကို.. ဖွင့်ချ ဖောက်ထုတ်ဖို့..အဲဒလို..အထူးပြုလုပ်ချက် ( ရုပ်ရှင် ပြဇာတ်) တွေ လိုသတဲ့.. တွေးစရာပဲလေ..း)
စိတ်ထဲအထိ လွှမ်းသွားတယ် ..။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရေးချက်လေး . . . .
တဒင်္ဂ အတွက်မာနတွေ နဲ့
ဥပေက္ခာနဲ့ မေတ္တာ ကြားမှာ ထိုးကြနှက်ကြပေါ့...
ဒါတွေက မှော်ဆရာရဲ့ ပြကွက်တွေလား...
အဲဒီပြကွက်တွေ လှည့်ကွက်တွေက အတုဆိုပေမယ့်..
ငွေပြာရောင်မင်းသမီးလေးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံထက်မှာ
သူတို့ကိုယ်တိုင် ထပ်လောင်း ပြောနေကြလေရဲ့။
( ကဗျာလေး ဖတ်ပီး အဲဒီသီချင်းနဲ့ မမတစ်ယောက်ကို မြင်မိတယ်.. ;-P )
ပြောရင်း ကျောင်းတောင် လွမ်းသွားဘီ။
ပစ္စလက် ပြကွက်တွေနဲ့ တူပြီး
ဇာတ်ဆရာက အဲ့ဒီ မှော်ဆရာ ဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်။
ဇာတ်ဆ၇ာ ခြေတစ်လှမ်း အမှားမှာ အပြာရောင်မင်းသမီးလေး ထက်ပိုင်းဖြတ်ပြကွက်ဟာ အတုလေလား၊ အစစ်လေလားး
တွေးမြင်ရင်း အသည်းတယားယား.. ရင်တဖိုဖို ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။
ရင်ထဲထည့်၍ အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်ဖတ်နေမိသည်။
တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ချခင်းထားတဲ့ ဒီကဗျာမှာ
အစတခုရဲ့ အဆုံးသတ်၊ အဆုံးတခုရဲ့ အစအဖြစ်
ထူးခြားတာက အချိန်ပြစကားလုံးတွေက တချိန်ထဲကိုပြနေတာ...ဒါဟာ ဘဝတခုရဲ့ အဆုံးသတ်နဲ့ နောက်ဘဝတခုရဲ့ ဖြစ်တည်မှု
ပြောပြနေတဲ့ တတိယလူရဲ့ စိုးရွံ့စိတ်၊ မချင့်မရဲစိတ်၊ ဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်တွေက....?????????
တခြားအမြင်ကနေ တွေးကြည့် ခံစားကြည့်ပါတယ် ..ရကိုမရဘူး...
ခံစားရသလို ချရေးလိုက်ရင်လဲ...ကဗျာဆရာကို ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေမှာမို့...မရေးတော့ပါဘူးဗျာ....အားလုံးလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ပြောဇတ်လေးတပုဒ်လို မြင်ကျမှာပါ..၊။
ငါးပြတိုက်သို့ ထပ်ပို့မည့် ငါးတကောင် ရဲ့အမည်
တကယ့်ကြယ်ကြီးတွေ ကြွေတုန်းက မတုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ နှလုံ...
ငါ့ကဗျာကို လက်ရသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မြို့
စာမျက်နှာပေါ်က ဆွဲဆုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကဗျာများအကြောင်း